Al-Shabaab oo weerar khasaaro geystay ka fuliyay Kenya - Awdinle Online
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaaday Saldhig Ciidanka dowladda ku leeyihiin deegaan ka tirsan Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Barre ee dalkaas.
Warar la helayo ayaa waxaa ay sheegaya in weerarka uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Lafeey oo ay Saldhig Ciidan ku leeyihiin Kenya, waxaana weerarka kadib halkaas ka dhacay dagaal kooban oo muddo socday.
Sidoo kale weerarka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan oo gaaray Ciidanka la weeraray, waxaana dadka deegaanka Lafeey ay ku warrameen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta la isdhaafsanayay.
Al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda dhinaca Khadka ayaa waxaa ay ku sheegeen in weerarkii ay ku qaadeen Saldhiga Ciidanka dowladda Kenya ay ku dhaawaceen Saddex Askari oo xiligaas ku sugnaa gudaha Saldhiga.
Dhinaca weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka Kenya ee ku sugan Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Barre ee dalkaas oo ay uga hadlayaan weerarka ka dhacay deegaanka Lafeey.
Previous articleCali Cosoble” Beesha Xawaadle Maamul ayay ku dhisanayaan Beledweyne”
Next articleAskari ka tirsan Ciidamada AMISOM oo toogtay Haweeneey